Soo dejisan Root Checker 6.4.8 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Root Checker
Root Checker – waa barnaamij loogu talagalay in lagu hubiyo xuquuqda superuser ee qalabka. Software-ka ayaa u diraa codsi aaladda wuxuuna soo bandhigayaa heerka asalka aaladda muddo gaaban gudaheed. Root Checker wuxuu kuu oggolaanayaa inaad la socoto natiijooyinka helitaanka xuquuqda xididka iyo muddada isticmaalkooda. Software-ka ayaa soo bandhigaya tirakoobka caalamiga ah ee aaladaha si guul leh xididdada iyo qaababka Android ee saamiga laga helo helitaanka fudud ee xuquuqda superuser ilaa midka aadka u adag. Root Checker wuxuu taageeraa isku xirka lacagta dheeriga ah ee la bixiyo taas oo go’aamisa nooca iyo habka binary ee fekerka superuser.
Eegista natiijooyinka helitaanka xuquuqda superuser
Tirakoobka caalamiga ah ee aaladda xididdada iyo noocyada Android
Isku xirka waxqabadka la bixiyay
Soo dejisan Root Checker
Faallo ku saabsan Root Checker
Root Checker Xirfadaha la xiriira